Wararka - Cadceedda ayaa sharraxday sawir-qaade iyo koronto
Unugyada Photovoltaic-ka ayaa qoraxda u beddelaya koronto
Unugga sawir-qaadashada (PV), oo badanaa loo yaqaanno unugga qorraxda, waa aalad aan farsamo-yaqaan ahayn oo iftiinka qorraxda toos ugu beddelaya koronto. Qaar ka mid ah unugyada PV waxay u rogi karaan iftiinka macmalka ah koronto.
Fotonyadu waxay qaadaan tamarta qorraxda
Iftiinka qoraxda wuxuu ka kooban yahay foton, ama walxaha tamarta qorraxda. Sawir qaadayaashani waxay ka kooban yihiin qadar kala duwan oo tamar ah oo u dhigma dhererka kala duwan ee hirarka qorraxda.
Unugga 'PV' wuxuu ka samaysan yahay walxaha semiconductor. Markay sawir qaadayaashu garaacaan unugga PV, waxay ka tarjumi karaan unugga, waxay dhex mari karaan qolka, ama waxaa ku nuugi kara qalabka semiconductor-ka. Kaliya sawir qaadayaasha nuugaya ayaa bixiya tamar dhalisa koronto. Marka maadada semiconductor-ka ay nuugto iftiinka qoraxda oo ku filan (tamarta qorraxda), elektaroonikada ayaa laga saaraa atomyada maaddada. Daaweynta gaarka ah ee maaddada dusha sare inta lagu jiro wax soo saarka waxay ka dhigeysaa dusha hore ee unugga mid aad u soo dhaweynaya kala-baxa, ama bilaash ah, elektaroonno si markaa elektaroonigyadu si dabiici ah ugu guuraan dusha sare ee unuga.
Dhaqdhaqaaqa elektaroonikada, midwalba oo sita culeys taban, dhanka kore ee gacanta unuga wuxuu abuurayaa isku dheelitirnaan la’aanta qarashka korantada inta udhaxeysa qeybta hore iyo gadaasha unuga. Isku dheelitir la'aantaani, markeeda, waxay abuureysaa awood koronto sida ba'anada taban iyo togan ee batteriga. Qalabka korantada ee unugga ayaa nuugaya elektaroonikada. Marka qaboojiyeyaasha ay ku xiran yihiin wareegga korantada ee xamuulka dibadda, sida batteriga, korantada ayaa ku socota wareegga.
Waxtarka nidaamyada sawir-qaadista ayaa ku kala duwan nooca tikniyoolajiyadda sawir-qaadista
Waxtarka ay unugyada PV u rogaan iftiinka qoraxda koronto waxay ku kala duwan yihiin nooca walxaha semiconductor iyo teknolojiyadda unugyada PV. Waxtarka modules PV ee ganacsi ahaan la heli karo ayaa celcelis ahaan ka hooseeya 10% bartamihii 1980-meeyadii, wuxuu kordhay ilaa 15% ilaa 2015, wuxuuna hadda ku sii dhowaanayaa 20% qaababka casriga ah. Unugyada tijaabada ah ee PV iyo unugyada PV ee suuqyada gaarka ah, sida dayax gacmeedyada, waxay ku guuleysteen ku dhowaad 50% wax ku ool ah.
Sidee nidaamyada sawir-qaadku u shaqeeyaan
Unugga 'PV cell' waa dhismaha aasaasiga u ah nidaamka PV. Unugyada shaqsiyeed way ku kala duwanaan karaan cabirkoodu qiyaastii 0.5 inji ilaa 4 inji guud ahaan. Si kastaba ha noqotee, hal unug kaliya wuxuu soo saaraa 1 ama 2 Watts, taas oo kaliya ku filan koronto isticmaalka yar, sida awood u siinta xisaabiyaha ama saacadaha gacanta.
Unugyada PV waxay koronto ku xiran yihiin xirmo, module-ka PV-ga ama cimilada cimilada ku xiran. Module-yada PV waxay ku kala duwan yihiin cabir ahaan iyo xaddiga koronto ee ay soo saari karaan. Awoodda dhalinta korantada moduleka PV waxay ku kordheysaa tirada unugyada ku jira qeybta hoose ama qeybta dusha sare ee moduleka. Qaybaha 'PV modules' waxay ku xirmi karaan kooxo si ay u sameeyaan PV array. Diyaargarowga PV wuxuu ka koobnaan karaa laba ama boqollaal qaybood oo PV ah. Tirada noocyada 'PV modules' ee kuxiran xariijinta PV waxay go'aamisaa wadarta qadarka korantada ee soo-saaristu abuuri karto.
Unugyada fotovoltaic waxay dhaliyaan koronto toos ah hadda (DC). Korontada DC-ga waxaa loo isticmaali karaa in lagu buuxiyo baytariyada taas oo iyaduna ah aaladaha korontada ku shaqeeya ee toos u adeegsada korantada hadda jirta. Ku dhowaad dhammaan korantada waxaa loo bixiyaa sida beddelka hadda (AC) ee nidaamka gudbinta korantada iyo qaybinta. Qalabka loo yaqaan rogayaal waxaa loo isticmaalaa moduleyaasha PV ama qaababyada si loogu beddelo korantada DC korantada AC.
Unugyada 'PV cell' iyo 'modules' waxay soo saari doonaan xaddiga korantada ugu badan markay si toos ah qorraxda ugu jeedaan Moodhadhka 'PV modules' iyo 'arrays' ayaa isticmaali kara nidaamyada raadraaca ee u wareejiya qaybaha in ay si joogto ah u wajahaan qorraxda, laakiin nidaamyadan ayaa qaali ah. Nidaamyada PV badankood waxay leeyihiin modules meel go'an oo leh qaybaha ay toos ugu wajahan yihiin koonfurta (woqooyiga woqooyi - si toos ah woqooyiga koonfurta) iyo xagal hagaajinaya waxqabadka jirka iyo dhaqaalaha ee nidaamka.
Unugyada 'photovoltaic unugyada' waxaa lagu soo ururiyey qaybo (modules), kumbuyuutarradana waxaa loo kala qaybin karaa qaabab kala duwan oo kala duwan si loo soo saaro koronto yar oo aad u tiro badan, sida awood u siinta matoorada biyaha ee xoolaha, bixinta guryaha korontada, ama korontada- koronto dhalinta.
Xigasho: Sheybaarka Tamarta Cusboonaysiinta Qaranka (waxaa iska leh)
Codsiyada nidaamyada sawir-qaadista
Nidaamyada ugu yar ee sawir-qaadista ee xisaabinta iyo saacadaha gacanta. Nidaamyada waaweyni waxay siin karaan koronto biyo soo saarida, qalabka isgaarsiinta korontada, siinta korontada hal guri ama meherad, ama sameysma qaabab ballaaran oo koronto siiya kumanaan macaamiisha korontada isticmaala.
Faa'iidooyinka qaar ee nidaamyada PV waa
• Nidaamyada PV waxay ku siin karaan korantada meelaha aysan ka jirin nidaamyada koronto qaybinta (khadadka korontada), waxayna sidoo kale koronto ku siin karaan shabakadda korantada.
• Qalabka PV si dhakhso leh ayaa loo rakibi karaa waxayna noqon karaan wax cabir ah.
• Saamaynta deegaanka ee nidaamyada PV ee ku yaal dhismayaasha waa mid aad u yar.
Unuggii ugu horreeyay ee wax ku oolka ah ee PV waxaa la sameeyay 1954 oo ay sameeyeen cilmi baarayaal Teleefon oo Bell ah Laga bilaabo dabayaaqadii 1950-meeyadii, unugyada PV waxaa loo adeegsaday in lagu xoojiyo dayax gacmeedyada Mareykanka. Dabayaaqadii 1970s, PV-yada waxay ka bixinaayeen koronto meel fog, ama off-Roobka, goobo aan lahayn xarig koronto. Laga soo bilaabo 2004, inta badan PV-yada lagu rakibo Mareykanka waxay ku jireen shabakad ku xiran nidaamyada guryaha, dhismayaasha, iyo xarumaha korantada ee saldhigga dhexe. Horumarka tikniyoolajiyadda, kharashka ka hooseeya nidaamka PV, iyo dhiirigelinno maaliyadeed oo kala duwan iyo siyaasadaha dowladda ayaa gacan ka geystay in si weyn loo ballaariyo isticmaalka PV ilaa bartamihii 1990-meeyadii. Boqollaal kun oo nidaamyada PV ee ku xiran shabakadda ayaa hadda lagu rakibay Mareykanka.
Maamulka Macluumaadka Tamarta Mareykanka (EIA) wuxuu ku qiyaasayaa in korontada laga soo saaro warshadaha korontada ku shaqeeya ee PV ay ka korodhay 76 milyan oo kilowatthours (kWh) sanadii 2008 ilaa 69 billion (kWh) sanadka 2019. Warshadaha korontada ku shaqeeya ee korantadu leeyihiin ugu yaraan 1,000 kilowaat (ama hal megawatt) oo ah awood dhalinta koronto. EIA waxay ku qiyaaseysaa in 33 bilyan oo kWh ay ka dhasheen nidaamyada PV ee isku xira shey-yar-yar ee 2019, illaa 11 bilyan oo kWh sanadka 2014. Nidaamyada yar-yar ee PV waa nidaamyo leh wax ka yar hal megawatt oo ah awoodda dhalinta korantada. Badankood waxay ku yaalliin dhismayaal mararka qaarkoodna waa la dhahaa dusha sare Nidaamyada PV.